Kulan looga Hadlayay Ilaalinta Deegaanka oo lagu Qabtay Gaalkacyo – Radio Daljir
Seteembar 28, 2015 10:27 b 0
Isniin, September 28, 2015 (Daljir) —Wasaradda Deegaanka, daaqa, duurjoogta iyo dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah magalada Gaalkacyo ku qabtay kulan dadka magalada loogu soo bandhigayay siyaasadda deegaanka, kaasoo lagu soo koobay buug yare wasaraddu soo diyaarisay.
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka Gobalka Mudug, Taliyaha ciidanka booliska gobalka, odayaasha dhaqanka iyo xubno matalayay bulshada rayidka ee Gaalkacyo.
Ugu horeyntii kulanka waxaa ka hadlay Saalim Siciid Saalim oo ah La-taliye ka tirsan wasaradda Deegaanka, wuxuna faah faahin kooban ka baxshay siyaasadda deegaanka oo meelo kale oo ka mid ah Puntland dadka loogu soo bandhigay.
Saalim waxa uu sheegay diyaarinta siyaasadan inay waqti soo qaadatay haddana uu diyaar yahay balse loo baahan yahay dadku inay fahan buuxa ka haystaan sharciga iyo qodobada ku qoran siyasada, wuxuna tilmaamay inay muhiim tahay in la ilaaliyo deegaanka iyo duurjoogta, maadama masuuliyadooda la saaray adoonka gaar ahaan madaxda deegaan kasta.
Shacabka ayuu ugu baaqay inay xil iska saaraan ilaalinta deegaanka, maadama dowladdu ay soo saartay siyaasadii lagu hagi lahaa deegaanka iyo duurjoogta, waxa kale uu sheegay Saalim Siciid in sharcigan yahay kii ugu horeeyay ee la sameeyo Soomaaliya oo dhan.
Gudoomiye ku xigeenka Gobalka Mudug Axmed Muuse Nuur-yare oo ka mid ahaa dadkii kulanka hadlay ayaa sheegay inay jiraan Hay’addo dhaqaalo ku baxsha sidii deegaanka dhaawac loogu gaysan lahaa wuxuna tusaale usoo qaatay barkadaha laga qado tuulooyinka kuwaasoo uu sheegay inaan lama isticmaalin, wuxuna codsaday lacagta lagu baxsho ceelaha iyo berkadaha aan loo baahnayn lagu qado loo wareejiyo meelaha u baahan, wuxuan tilmaamay in tilaabooyin wasaradda Deegaanku ka qado.
DHAGAYSO: Habkii ay u Dhacday Doorashada Golaha Deegaanka Degmada Bosaaso